/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအတွက် Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
အပေါ် Posted 11 / 18 / 2019 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
1. Pyridoxal Hydrochloride ဆိုတာဘာလဲ။
Pyridoxal Hydrochloride သို့မဟုတ် ဗီတာမင် B6 အများအားဖြင့်အစားအစာများတွင်တွေ့ရသောရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ဖြည့်စွက်အနေဖြင့်အသုံးပြုပါက Pyridoxal Hydrochloride သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများစွာကိုကုသနိုင်သည်။ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်၊ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊
သင်သည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူဖြစ်လျှင်၎င်းဗီတာမင်သည်သင့်အတွက်သင့်လျော်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌အကျိုးရှိသောလုပ်ဆောင်မှုများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော lipids, carbohydrates နှင့် amino acids များထုတ်လုပ်ရာတွင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကူညီသည်။
ကြက်၊ ကြက်ဆင်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများတွင်ပါ ၀ င်သောအစားအစာတွင် pyridoxine hydrochloride vitamin B6 ၏ရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။
2. ဘာကြောင့် Bodybuilders သည်ဗီတာမင်များလိုအပ်သည် - pyridoxine Hydrochloride?
ဘာကြောင့်ဗီတာမင်တွေခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူတွေအတွက်ဒီလောက်အရေးကြီးရတာလဲ။ သင်တစ်နေ့တာအတွင်းသင်၏အလုပ်များကိုပြီးမြောက်စေရန်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရေးပါသောအာဟာရဓာတ်များကိုကျွေးမွေးရမည်။ ဤအာဟာရဓာတ်များကိုမဆိုချို့တဲ့ခြင်းသည်သင်၏ဇီဝဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းကိုပျက်စီးစေသည်။ ဤသည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူအနေဖြင့်အထိုင်များသောလူနေမှုပုံစံကို ဦး ဆောင်သူများထက်အာဟာရများပိုလိုအပ်သည်။ B-6 pyridoxine hydrochloride သည်သင့်အတွက်အထူးအရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကြွက်သားဖော့စဖောရိလိတ် (glyphogen metabolism) နှင့်ဆက်နွှယ်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုတိုပြောရရင်ကျန်းမာတဲ့ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအတွက်ဗီတာမင် B6 လိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B6 သည်ပရိုတိန်းပြိုကွဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအင်ဇိုင်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
Pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပရိုတိန်းဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမှာ ၄ င်း၏အခန်းကဏ္ with နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဒါကြောင့်မို့လို့အားကစားခန်းမထဲမ ၀ င်ခင်မှာပရိုတင်းနံနက်စာကိုစားသုံးသင့်ပါတယ်။ သင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်၊ လေ့ကျင့်ပြီးနောက်၊ အိပ်ရာမဝင်ခင်ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုသင်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သို့သော်၊ ဤသည်မှာသင်သည်အခြားအစားအစာများကိုလျစ်လျူရှုသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတ္တုဓာတ်များစွာကိုလိုအပ်ပြီးသင့်ကိုရောဂါများမှကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
3. ကြံ့ခိုင်ရေးအပေါ်ဗီတာမင်အဖြစ် Pyridoxine Hydrochloride ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ။
သငျသညျ B6 လိုအပ်ကြောင်းနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုသင့်ရဲ့ခုခံအဆင့်ကိုတိုးတက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ B6 သည်သင်၏အစားအစာတွင်သံကိုပိုမိုရရှိနိုင်စေသည်။ ဖိစီးမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်သင်၏ကြွက်သားများသည်သံနှင့်ဟေမိုဂလိုဘင် (အောက်ဆီဂျင်) လိုအပ်သည်။
သင်အလုပ်ထွက်ချိန်တွင်စွမ်းအင်များစွာလိုအပ်သည်။ Pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်သည်သင်၏ဆဲလ်များအတွင်းဘိုဟိုက်ဒရိတ်များလောင်ကျွမ်းမှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်အလုံအလောက်ရရှိစေသည်။
လေ့ကျင့်နေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ အားစိုက်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးများ၌လည်းပြောင်းလဲမှုများရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုများပြားလာခြင်းကြောင့်မစင်၊ ဆီးနှင့်ချွေးတို့တွင်အာဟာရဓာတ်များစွာကိုသင်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
ဤအကြောင်းများကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အာဟာရများကိုဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏တစ်သျှူးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ဖြည့်စွက်ဆေးများအားဖြင့်သင်ဤသို့ပြုလုပ်နိုင်သည် ၎င်းသည်သင်၏တစ်ရှူးများအားပိန်။ အားဖြည့်နေစေရန်သေချာစေသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ကြွက်သားထုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်လိုပါက pyridoxine hydrochloride vitamin B6 ထက်ပိုကောင်းသည့်ဖြည့်စွက်မရှိပါ။
4. Pyridoxal Hydrochloride ၏သမိုင်း
Pyridoxal Hydrochloride (65-22-5) ကို 1939 တွင်ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း 1934 တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုဟန်ဂေရီဆရာဝန် Paul Gyorgy မှပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူက၎င်းကိုဗီတာမင် B6 ဟုခေါ်ပြီးကြွက်များတွင်အရေပြားအခြေအနေဖြစ်သောအရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်သည့် acrodynia ကိုကုသရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးငါးနှစ်အကြာတွင်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Samuel Lepkovsky က၎င်းအားဆန်ဖွဲနုများနှင့်ခွဲထုတ်ရန်စီမံခဲ့သည် pyridoxine hydrochloride အမှုန့်.
၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် Folkers နှင့် Harris တို့သည် pyridoxine ဖွဲ့စည်းပုံကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ခြောက်နှစ်အကြာတွင် Snell က B1939 သည် pyridoxamine နှင့် pyridoxal ပုံစံနှစ်မျိုးရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဗီတာမင် B6 သည် pyridine နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့် Pyridoxal Hydrochloride ဟူသောအမည်ပေါ်လာသည်။
ယနေ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် Pyridoxal Hydrochloride ကို၎င်းတို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆေးဝါးစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲဒါကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အလုံခြုံဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးဆေးတွေထဲကတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားလို့ပါ။ ၎င်းဆေးကိုတန်ပြန်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
5. bodybuilders များအတွက် Pyridoxal Hydrochloride သောက်သုံးသော
ခ - ဗီတာမင်များထဲတွင် Pyridoxal Hydrochloride သည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆဲလ်အသစ်များ၏ကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည် Pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက် Bodybuilding စွမ်းရည်။ B6 သည်ပိုတက်စီယမ်နှင့်ဆိုဒီယမ်ကိုဟန်ချက်ညီစေရန်ကူညီခြင်းနှင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်နျူကလိယအက်ဆစ်များ၊ DNA နှင့် RNA များထုတ်လုပ်ရာတွင်ကူညီသည်။
အမျိုးသမီးများသည်ဟော်မုန်းများကိုဟန်ချက်ညီစေရန်နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုကူညီရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် premenstrual fluid ကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်သည်။
Pyridoxal Hydrochloride ၏ချို့တဲ့မှုသည်ကြောက်ရွံ့မှု၊ ယားယံခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ အရောင်တောက်သောလက်သည်း၊ အဆစ်ရောင်ခြင်းနှင့်အရိုးပွရောဂါဖြစ်ခြင်းကို ဦး တည်စေသည်။
FDA ၏အကြံပြုထားသည့်ဆေးပမာဏမှာ 2mg ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ချက်များအရပုံမှန်ဆေးပမာဏမှာ 20mg ဖြစ်သည်။ Pyridoxal Hydrochloride သည် 2000mg ထက် ပို၍ သောက်ပါကအဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သို့သော်သုတေသနတစ်ခုအရအမေရိကန်အစိုးရမှတက်ကြွသောလူများအတွက်အကြံပြုထားသောလက်ရှိ Pyridoxal Hydrochloride သောက်သုံးခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာအစားအစာအုပ်စုများကိုကန့်သတ်သောသို့မဟုတ်ကယ်လိုရီကိုကန့်သတ်သောသူများသည်ချို့တဲ့မှုအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အစိုးရမှအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းသာသူတို့သည်ဆေးကိုသောက်လျှင် pyridoxine hydrochloride သက်ရောက်မှုများမှအကျိုးမခံစားရပေ။
ဤသုတေသန၏ရလဒ်များကို အခြေခံ၍ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး / လုံလောက်သော pyridoxine hydrochloride သောက်သုံးသောပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။
6. Pyridoxal Hydrochloride ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု
US မှာဗီတာမင် B6 ချို့တဲ့မှုမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကသက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည် hyperthyroidism၊ celiac ရောဂါ၊ autoimmune ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါသို့မဟုတ်အရက်သောက်ခြင်းစသည့်အခြေအနေများကိုခံစားနေရလျှင်သင် B6 ချို့တဲ့မှုကိုခံစားရနိုင်ခြေမြင့်မားသည်။
ခန္ဓာကိုယ်သည်ဗီတာမင် B6 ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုသင်ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အစားအစာများမှရယူရမည်။ နာတာရှည်ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးအတွက်ဗီတာမင်လုံလောက်စွာစားသုံးရန်လိုအပ်သည်။
ဤတွင်သိပ္ပံကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာ pyridoxine hydrochloride ကိုးခုကိုအသုံးပြုထားသည်။
B-6 pyridoxine hydrochloride စိတ်ဓါတ်များကိုထိန်းညှိရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိပေးတဲ့ neurotransmitter ကိုဖန်တီးပေးလို့ပဲ။ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် Pyridoxine hydrochloride သည်စိတ်ခံစားမှုရှိသူများသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဟော်မုန်းမညီမျှမှုကြောင့်စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းရှိသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
B6 သည်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာပြproblemsနာများအတွက်တာဝန်ရှိသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သော homocysteine ​​၏သွေးပမာဏကိုလည်းလျှော့ချပေးသည်။ လေ့လာမှုအတော်များများသည်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများကိုသွေးထဲတွင် pyridoxine hydrochloride အဆင့်နိမ့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
(2) အယ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုသက်သာစေပြီး ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်သည်
ဗီတာမင် B6 သည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကာကွယ်တားဆီးရာတွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္ for ကြောင့်လူသိများသည်။ ၎င်းသည်သွေးအတွင်းရှိ homocysteine ​​ပမာဏကိုလျော့နည်းစေသဖြင့်မှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုလျော့နည်းစေသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရသိပ္ပံနည်းကျနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်မြင့်မားသောသွေး homocysteine ​​ပါဝင်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၅၆ ယောက်ပါဝင်သောလေ့လာမှုတစ်ခုကမြင့်မားသော pyridoxine hydrochloride သောက်သုံးမှုသည်သွေးအတွင်းရှိ homocysteine ​​ပမာဏကိုလျော့ကျစေပြီးအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအချို့သော ဦး နှောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဗီတာမင် B6 သည်၎င်း၏ချို့တဲ့မှုကြောင့်သွေးအားနည်းရောဂါကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ဟီမိုဂလိုဗင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အဓိကပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟီမိုဂလိုဗင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာဆဲလ်များသို့အောက်ဆီဂျင်ကိုပို့ပေးသည်။ ဟီမိုဂလိုဗင်အဆင့်နည်းနည်းဖြင့်သင်၏ဆဲလ်များသည်အောက်စီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်မရရှိခြင်းကြောင့်သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ပေါ်လာပြီးသင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နိုင်သည်။
အထူးသဖြင့်ကလေးမွေးသောအမျိုးသမီးများနှင့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်သူများအတွက်ဗီတာမင် B6 ပမာဏသည်သွေးအားနည်းရောဂါနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
(4) Premenstrual Syndrome (PMS) ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသပေးသည်။
pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာနာကျင်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သော PMS ၏လက္ခဏာများကိုကုသရန်ဖြစ်သည်။ သုတေသီများကယုံကြည်သည်မှာဗီတာမင် B6 သည်ဤလက္ခဏာများကိုကုသနိုင်ပြီး၎င်းသည်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့် neurotransmitter ကိုဖန်တီးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်းနှင့်စိတ်အပြောင်းအလဲများအပါအဝင် PMS လက္ခဏာများသည်မဂ္ဂနီစီယမ်၏ 200mg နှင့်တစ်နေ့လျှင်ဗီတာမင် B50 ၏ 6mg ကိုသောက်ခြင်းဖြင့်များစွာလျော့နည်းသွားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းဗီတာမင် B6 သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်ပျို့အန်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နံနက်နေမကောင်းရောဂါကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့် Diclegis ဆေးပါ ၀ င်သည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဤအခြေအနေမှခံစားနေရသောအမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး pyridoxine hydrochloride အကျိုးကျေးဇူးများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်၌မှန်ကန်သော pyridoxine hydrochloride ဆေးသည်လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီး ၃၄၂ ဦး ပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရဗီတာမင် ၃၀ မီလီဂရမ်သည်နေ့စဉ်ကုသမှုစတင်ပြီးငါးရက်အကြာတွင်သူတို့၏ပျို့ချင်စိတ်ကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
126 ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည့်အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ 75mg ဗီတာမင် B6 ကိုနေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်ပျို့အန်ခြင်းနှင့်အန်ခြင်းဖြစ်စဉ်များကိုများစွာလျော့ချပေးခဲ့သည်။ လေးရက်အကြာတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် pyridoxine hydrochloride ၏ထိရောက်မှုကိုပြသပြီးနောက် 41% လျော့နည်းသွားသည်။
Pyridoxine hydrochloride သည်သွေးကြောများပိတ်ဆို့ခြင်းကိုတားဆီးရာတွင်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့နည်းစေသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဗီတာမင် B6 နည်းနေပါကနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်သည်သွေးထဲရှိဗီတာမင်ပုံမှန်ပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်ဆနီးပါးရှိလာလိမ့်မည်။ ဗီတာမင် B6 သည်သွေးအတွင်းရှိ homocysteine ​​ပမာဏကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်သွေးကြောများပိတ်ဆို့ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကြွက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ဗီတာမင် B6 တွင်ချို့တဲ့မှုနှုန်းမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းတို့သည် homocysteine ​​နှင့်ထိတွေ့ပါကသွေးလွှတ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လူသားများနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနပြုချက်အချို့အရ Vitamin B6 သည်နှလုံးရောဂါများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည် ပေးထားသော pyridoxine hydrochloride ယနေ့ကင်ဆာ၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့။ အကယ်၍ သင်သည် Pyridoxine hydrochloride အလုံအလောက်ရရှိပါကအချို့သောကင်ဆာအမျိုးအစားများကိုဖွံ့ဖြိုးရန်သင့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်မရှင်းလင်းသော်လည်းသုတေသီများက B6 သည်နာတာရှည်ရောဂါများဖြစ်သောကင်ဆာကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
12 လေ့လာမှုများကိုလေ့လာပြီးနောက်အချို့သုတေသီများက B6 ၏လုံလောက်သောသွေးပမာဏသည်အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ သင့်တွင်မြင့်မားသော B6 ရှိပါကအူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းသည် B50 အဆင့်နိမ့်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 6% လျှော့ချပါလိမ့်မည်။
pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်အဆင့်နှင့်ရင်သားကင်ဆာအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပြုလုပ်သောသုတေသနပြုချက်တစ်ခုအရသွေးတွင်းရှိ B6 ပမာဏသည်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်၊ အထူးသဖြင့်မီးမထိုးမီအမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဗီတာမင် B6 သည်မျက်လုံးရောဂါများအထူးသဖြင့်အိုမင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သော macular degeneration (AMD) ကိုကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။ သင်၏သွေးထဲတွင် homocysteine ​​စီးဆင်းမှုမြင့်မားပါက AMD ဖွံ့ဖြိုးမှုအန္တရာယ်ပိုများနိုင်သည်။ Pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်သည်သွေးထဲတွင်မြင့်မားသော homocysteine ​​ပမာဏကိုလျှော့ချရာတွင် AMD ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့နည်းစေသည်။
5,000 အမျိုးသမီးများထက်ပိုသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရဗီတာမင် B6 နှင့်ဖောလစ်အက်စစ်တို့နှင့်ပေါင်းစပ်သောနေ့စဉ်ဆေးပမာဏသည်ဗီတာမင်မသောက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် AMD ၏အန္တရာယ်ကို 12% အထိလျှော့ချနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အခြားသုတေသနတစ်ခုကမျက်စိပြproblemsနာများနှင့်သွေးထဲတွင်ပါဝင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ အထူးသဖြင့် retina နှင့်ဆက်နွယ်သောသွေးပြန်ကြောများကိုပိတ်ဆို့စေသည့်မျက်လုံးပြproblemsနာများ။ pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်နိမ့်အဆင့်ကိုလည်း retina ၏ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အဆစ်ရောင်ရမ်းရောင်ရမ်းခြင်းကိုခံစားနေရပါက B6 သောက်ခြင်းသည်သင်၏နာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ Arthritis ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ B6 ပမာဏကိုလျော့နည်းစေပြီးဤအဆင့်ကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။
43 အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ 5mg folic acid နှင့် B100 ၏ 6mg ပေါင်းစပ်မှု၏နေ့စဉ်ဆေးပမာဏသည် 12 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိရောင်ရမ်းမော်လီကျူးများ၏အဆင့်ကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
7. Pyridoxal Hydrochloride ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်သည်ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်သူများအသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်။ ၎င်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်အတွက်လည်းလုံခြုံသည်။ သို့သော်၎င်းသည်လူအမျိုးမျိုးတွင်ကွဲပြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ အချို့ pyridoxine hydrochloride ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
ဓာတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများသည်အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့ချုပ်၊ သင်၏နှုတ်ခမ်း၊ မျက်နှာ၊
နေရောင်ခြည်မှ sensitivity ကို
အကယ်၍ သင်ပြင်းထန်သော pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားရပါကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းသည်သင့်အတွက် ပို၍ ကောင်းသည်။
8. Pyridoxal Hydrochloride အတွက်သတိပေးချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများဘာတွေလဲ။
အလွန်မြင့်မားသော Pyridoxal Hydrochloride သည်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကားရောဂါများ, အလှည့်, တည်ငြိမ်ရေးပြproblemsနာများနှင့်ခြေထောက်အတွက်ခံစားမှုဆုံးရှုံးဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်ပမာဏများသောအစီရင်ခံစာများလည်းရှိသည် pyridoxine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက် အရေပြားတုံ့ပြန်မှုကို ဦး တည်သွားစေနိုင်သည်။ ကံကောင်းတာက, သင်မြင့်မားသောဆေးများကိုရပ်တန့်သောအခါ, သင်အပြည့်အဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လိမ့်မယ်။
ကိုယ် ၀ န်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံမသောက်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဆရာဝန်တစ် ဦး တည်းသာကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် Pyridoxine hydrochloride ပမာဏကိုဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ သင်သည်ကာယဗလလေ့ကျင့်သူဖြစ်စေ၊ မသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့်စကားမပြောလျှင် pyridoxine hydrochloride ၏ 100mg ထက်ပိုမသောက်သင့်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုပါ။
သင်သည် Pyridoxal Hydrochloride ဆေးဝါးသုံးစွဲနေစဉ်သင်၏ဆေးဝါးကုသမှုခံယူသူ၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနှင့်မရပ်တန့်ပါနှင့်၊ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။
Pyridoxal Hydrochloride သည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပြင်းထန်သောသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုမသိရှိရသော်လည်းသတိထားပါ။
Cordarone (Amiodarone) သည် B6 နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါနေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုခံနိုင်သည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုကသင်၏အရေပြားပေါ်ရှိအဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း၊ ဤပေါင်းစပ်ဆေးကိုသောက်သည့်အခါအကာအကွယ်အဝတ်အစားများသို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုဝတ်ဆင်ပါ။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် Luminal (Phenobarbital) ကိုဖြိုခွဲပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) Luminal ပြိုကွဲသွားသည့်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစွမ်းအားကိုလျော့ကျစေသည်။
Luminal လိုပဲ Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီဓာတုပစ္စည်းကိုဖြိုခွဲ။ Dilantin နှင့် Pyridoxal Hydrochloride ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိယခင်များ၏ထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤအရာသည်သင့်အားဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်နိုင်ချေပိုများစေနိုင်သည်။
Pyridoxal Hydrochloride နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောအခြားဆေးဝါးများမှာ -
Pyridoxal Hydrochloride သည်မတူညီသောဆေး ၇၀ ကျော်နှင့်အနည်းငယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ မည်သည့်ဆေးကိုမဆိုအသုံးမပြုမီသင့်ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးသူအားဆက်သွယ်ပါ။
B6 သည် BT ဗီတာမင် MCT's၊ CLA, zinc, ဆိုဒီယမ်, ပိုတက်စီယမ်, မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်ဗီတာမင်စီတို့နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအတွက် Pyridoxal Hydrochloride ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာများပြားလှသည်။ အလေးချိန်အားကစားသမားတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများသာမကဤဗီတာမင်ဓာတ်များသိုလှောင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ဆေးဆရာဝန်များကအကြံပြုထားသောဆေးများကိုတိတိကျကျလိုက်နာရန်သင်အသုံးပြုသင့်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောအားစိုက်ထုတ်မှုများကခန္ဓာကိုယ်၏ဆဲလ်များနှင့်ကြွက်သားများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ယင်းတို့ကိုဗီတာမင် B6 ဖြည့်စွက်ဆေးများဖြင့်အစားထိုးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ကိုဝယ်တဲ့အခါ Pyridoxal Hydrochloride ထုတ်ကုန်, သင်ကဲ့သို့သောဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကနေအဲဒီလိုသေချာအောင် Aasraw။ တရား ၀ င် Pyridoxine hydrochloride ကိုဝယ်ရန်ယနေ့ aasraw.com သို့ သွား၍ အမှာစာလုပ်ပါ။
1 Osswald, H, et al, 1987 ဆိုဒီယမ်အက်စ်ကောဘိတ်၊ menadione ဆိုဒီယမ် bisulfite သို့မဟုတ် pyridoxal hydrochloride ၏အဆိပ်အတောက်နှင့် antineoplastic လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် P-388 သွေးကင်ဆာသို့မဟုတ် M ကြွက်များတွင်အဆိပ်အတောက် 5076 (43) -2PMID: 183
2 Reimer, LG, et al, 1983 ၏ pyridoxal ၏အာဟာရမျိုးကွဲ streptococci နှင့်အခြားဘက်တီးရီးယားများ၏သိုးသွေး agar ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အဏုဇီဝဗေဒနှင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါ 1 (4): 273-5 PMID: 6667606
3 Zygmunt, WA, et al၊ ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားမှု၏ d-CYCLOSERINE အယူအဆ၏ 1962 နောက်ပြန်ဆုတ်မှု ALANINE ၏ဘက်တီးရီးယားဗေဒဂျာနယ် 84 (1): 154-6 PMID: 16561951
1269 Views စာ
၆ - ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ Afatinib နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများ (NSCLC)
Flibanserin သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားလိင်ဟော်မုန်းအဖြစ်မည်သို့ကူညီသနည်း Synephrine HCL Powder - အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းတို့ဖြစ်သည်